Bursa Metro Saatleri Bilet Fiyatları ve Güzergah Haritası – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaQiimaha Tigidhada Jadwalka Magaalada Bursa iyo Khariiddada Jidka
31 / 10 / 2019 16 Bursa, GUUD, Khariidadaha, HAY'ADAHA, TURKEY
bursaray map iyo guzergahi
Jadwalka Jidadka Magaalada Bursa, Qiimaha tikidhada iyo Khariiddada Jidka; Waxaa jira xarumo 7 ah oo ku yaal Bursaray, oo ay ku jiraan dhulka hoostiisa ee 38. Dhererka wadarta labada waddo waa 39km gebi ahaanba waa ka madax banaan tahay nidaamka wadada.
Khadka ugu dheer ee BursaRay: 2. Khadkan mitirka wuxuu ka bilaabmaa (Kestel) Kestel Stop wuxuuna ku dhamaadaa (Nilüfer) Stop University. 31 wuxuu daboolayaa aag kilomitir ah wuxuuna leeyahay xNUMX joogsi.
Khadka ugu gaaban: 1. Xariiqda mitirku waxay ka bilaabataa (Nilüfer) Emek stop wuxuuna ku dhamaadaa (Yıldırım) Arabayatağı istaag. 20 wuxuu daboolayaa aagga 18 km oo joogsi leh.
Wadada BursaRay waxay ku biireysaa Xarunta Shaqaalaha ee Mudanya Road iyo Xarunta Kestel ee galbeedka laga bilaabo Jaamacadda. Ka dib, Wadada Ankara ka dib, waxay ka baxdaa Kent Square ilaa Squareehreküstü Square waxayna raacaysaa Ha followsim İşcan Street waxayna dib ugu laabataa Ankara Road iyada oo loo sii marayo Vaduct waxayna ku dhamaanaysaa Saldhigga Kestel. Nidaamka loo yaqaan Bursa Metro dhab ahaantii waa nidaam tareeno fudud oo nidaamkan xadiidka fudud wuxuu ka shaqeeyaa isku dhafka baabuurta Bursa.
Wadada Bursaray Khariidadda iyo saldhigyada
Khadadka Wadada Bursaray iyo Saldhigyada
Wadada BursaRay waxay ku biireysaa Xarunta Shaqaalaha ee Mudanya Road iyo Xarunta Kestel ee galbeedka laga bilaabo Jaamacadda. Kadib, iyadoo la raacayo Wadada Ankara, waxay ka baxaysaa Kent Square ilaa Şehreküstü Square waxayna raacaysaa Haşim İşcan Street waxayna dib ugu laabataa Ankara Road iyada oo loo sii marayo wadada Vabact waxayna ku dhamaanaysaa Saldhigga Arabayatağı.
Dhererka Xariiqda 39 km
Looxyada Warehouse 9,9 km
Tirada Saldhigyada 38 (7 Wareegyada Underground)
Nooca Tamarta 1500 V DC
Nooca Quudinta Tamarta Catanery
Xawaaraha Sare 70 km / h
Wareegga Wadada 1435 mm
Qeybta Ugu Yar ee Kabriidka 110 m
Dhererka Dhererka 120 m
Saacadaha Magaalada Bursa
Saldhigyada metrooga ee Bursa Rakaabku waxay bilaabaan inay qaadaan saacadaha qaarkood. Bursaray, oo bilaabay gaadiid subixii hore ee subaxdii, ayaa sii wadata adeegidda illaa iyo goor dambe oo habeenkii ah. Laga bilaabo 05.40 oo ay sii socoto ilaa 00.16 habeenkii, Bursaray waxay awoodaa inay bixiso adeegyo waqtiyo kaladuwan maalmaha fasaxa. Khadka tareenka ee Bursa waqtiyadu way kala duwanaan karaan inta lagu jiro ciidaha guud ama ciidaha.
Qiimaha Tikidhada Bursa Metro
Tigidh buuxa £ 2,55
arday £ 1,45
Tigidhada la dhimay £ 2,10
bishii oo ah kaarka diiwaangelinta ardayda lacag 100 waa TL.
Taariikhda Magaalada Bursa
31 Janaayo 1997 BursaRay qandaraas ayaa la saxeexay.
14 Oktoobar 1998 howlaha dhismaha ee BursaRay ayaa bilaabmay.
23 Abriil 2002, BursaRay 1 oo daboolaya Wershadaha Yaryar - Magaalooyinka iyo Wershadaha abaabulan - Khadadka Acemler. Howlgalka tareenka rakaabka ayaa laga bilaabay Qaybta A. (Xarunta 17)
12 May 2008 wuxuu bilaabay howlgalka tareenka ee BursaRay 1.Step B Qaybta coveringehreküstü - khadka Arabayatağı. (Xarunta 6)
24 Diseembar 2010, BursaRay 2 waxay daboolaysaa Jaamacadda Warshadaha-yar iyo Khadadka Wershadaha-Ganacsiga ee Aasaasay. Howlgalka tareenka rakaabka ayaa ka bilaabmay Qeybta Marxaladda. (Xarunta 8)
19 Maarso 2014 wuxuu bilaabay howlgalka tareenka ee BursaRay 3.Step Qaybta daboolaya khadka Arabayatağı-Kestel. (Xarunta 7)
15 Bishii Janaayo 2016, nidaamka calaamadda calaamadda Kestel Stage ayaa la magacaabay oo hawlgal aan joogsi lahayn uu ka bilaabmay inta u dhexeysa Jaamacadda iyo Kestel.
Khariidadda Nidaamka Tareenka ee Bursa
Isbeddelka isbeddelka waddooyinka Basaska ee Baska (Khariidadda Cusub)
Qiimaha Tikidhada Xawaaraha Sare ee Eskisehir Konya iyo Khadka Khadka Tooska ah
Konya, tareenka Xawaaraha Sare Eskişehir Route Map iyo Saacadaha Qiimaha tikidhada
Samsun Tram Times iyo Khariidadda Jidadka
Xafiiska Xawaaladda ee Caravan ayaa tagaya Kandira
Waxaan taageernaa mashruuca tareenka ee Samsun Sarp